KUZOVALWA IZIKOLE KULANDELA UKUBHEBHETHEKA KWE-CORONAVIRUS – Sivubela intuthuko Newspaper
Ukuwasha izandla ngensipho kubalwa njengendlela yokuqala yokuzivikela ekutholeni iCoronavirus .
UMENGAMELI wezwe iNingizimu Afrika uMnu Cyril Ramaphosa usememezele ukuthi izikole zizovalwa ngoLwesithathu mhlaka 18 kuNdasa kuphinde kuvalwe nokuvakasha emajele kulandela ukunyuka kwesibalo sabantu asebetheleleke nge-COVID19 njengamanje okuqinisekiswe ukuthi bangama-61 asebenaso.
Ukusho lokhu izolo emhlanganweni abewubambe neKhabhinethi emva kokuba kutholakale ukuthi isibalo sabantu abasuleleka ngaleli gciwane balokhu benyuke njalo ngenxa yokuhlanganyela endaweni eyodwa enabantu abeqile kwabayi-100 njengezikole nezinye.
UMengameli uthe izikole bekulindeleke ukuthi zivalwe ngoLwesihlanu kodwa sezizovalwa ngoLwesithathu kuze kube yiPhasika, emajele khona ngeke kuvunyelwe ukuvakasha kusukela izolo kanti lokho kuzoqhubeka isikhathi esingangezinsuku ezingama-30.
“Muva nje kutholakale ukuthi kunesitshudeni sase Wits University osekuqinisekiswe ukuthi sesinalo leli gciwane emva kokuhlolwa nosekucelwe ukuba bonke abasondelene naso bayohlwa,” kuchaza uMengameli.
Uthe lokhu kuvalwa kwezikole isikhala sakho sizovalwa uma sekuvalelwa uNhlangulana (Juni) okuzoncishiswa ukuvalwa kwakhona ngesonto elilodwa. Uphinde washo nokuthi kuzoqinisekiswa ukuthi izikole zihlanzekile ngesikhathi zisavaliwe ukuze abafundi uma sebebuyela ezikoleni bengeke bafice lamagciwane.
“Sicela izinkampani, isezitolo, isezimayini, isemabhange kanye nakwezinye izindawo ziqinisekise inhlanzeko, nathi sizoqinisekisa ukuthi izikole, imitholampilo naseziteshini zamaphoyisa kucocekile,” kuqhuba uRamaphosa.
Uphinde wagcizelela ukuthi abantu bawashe izandla ngenzipho njalo uma beqeda ukuthinta izinto ezisetshenziswa abantu abaningi, bavale imilomo ngethishu uma bekhwehlela noma bethimula bese bengasondelani nabantu abanezimpawu zomkhuhlane.
KULINDELEKE BAPHINDE BASHAYE INTO ECOKEME ABAFANA BES’THENDE